Famonoana rivotra azo entina, Masinina famonoana rivotra - FAUCI
Famonoana rivotra azo entina
Robot manaparitaka rivotra
Masinina famonoana rivotra
Fanamarinana sy tatitra
Cube famonoana rivotra
Disinfector amin'ny rivotra fiara
Deodorizer sy Freshener
Fanandramana momba ny fahatanorana
Ataovy ao anaty siny fitaratra roa ny mofo vao namboarina, ny iray miaraka amin'ny FAUCI AAPG Material, ary ny iray tsy misy. Ampio rano ny siny roa mba tsy ho maina ny sakafo. Aorian'ny 7 andro, ny mofo ao anaty siny fitaratra misy Fauci AAPG Material dia toa tsy simba nefa ny mofo ao anaty vera tsy misy FAUCI AAPG Material dia voahodidin'ny bakteria sy bobongolo betsaka, famantarana mazava ny FAUCI AAPG Material mamono bakteria sy bobongolo ao ny siny fitaratra.
Fanandramana misy poizina
Ny FAUCI AAPG Material dia atsofoka ao anaty fitoeran-drano misy trondro kely. Rehefa afaka 27 andro, dia mbola velona ny trondro kely, milaza fa tsy mampaninona ny trondro kely ny FAUCI AAPG Material.
Fampisehoana ny Robot FAUCI mamono otrikaretina
Robot FAUCI Air Disinfecting Robot dia mampiseho ny famafana ny lafarinina sy ny famonoana rivotra amin'ny tontolo iainana. Masinina tena ilaina amin'ny paikady fanarenana COVID-19 izy io.
Shanghai Fauci Technology Co., Ltd dia orinasa iray vaovao mikendry ny fampandrosoana sy fanomezana vokatra desinfection, fanadiovana ary fanalefahana rivotra mba hihaonana amin'ny fitomboan'ny fangatahan'ny rivotra avo lenta ataon'ireo mpanjifa manerantany.